Newcastle United Oo Ka Baxday Xiisaha Ay U Qabto Ciyaaryahanka Manchester United Jesse Lingard.
HomeWararka CiyaarahaNewcastle United oo ka baxday Xiisaha ay u qabto ciyaaryahanka Manchester United Jesse Lingard.
Newcastle United ayaa lagu soo waramayaa inaysan haatan xiiseyneynin saxiixa weeraryahankaManchester United Jesse Lingard .
29-sano jirkaan ayaa si xoogan loola xiriirinayay inuu amaah ugu dhaqaaqay Magpies bishii Janaayo, laakiin kooxda Eddie Howe ayaan diyaar u aheyn inay bixiso 16 milyan oo ginni oo amaah ah oo loo maleynayay inay Man United ku dalbaneyso adeegiisa.
Qandaraaska Lingard ee Old Trafford wuxuu dhacayaa dhamaadka bisha June, si cajiib ah uma badna inuu qalinka ku duugo heshiis kordhin, iyadoo xiddiga heerka caalami ee dalka England lagu heli karo beeca xorta ah.
Newcastle ayaa la aaminsanaa inay tahay kooxda ugu cadcad weerarka, iyadoo kooxda Ingariiska ay dhawaan la wareegtay taasoo ka dhigtay mid ka mid ah kooxaha ugu qanisan kubbada cagta adduunka.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay The Telegraph , kooxda Howe ma daba gali doonto wax soo saarka akadeemiyada Man United xagaagan inkastoo lagu heli karo beeca xorta ah.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Lingard uu doonayo mushaar ka badan £150,000 todobaadkii, marka lagu daro lacag badan oo uu kula soo wareego, oo uu ka helayo kooxdiisa xiga.
Newcastle ayaa lagu eedeeyay inaysan diyaar u ahayn inay ka dhigto xiddiga reer England ciyaaryahanka ugu mushaarka badan, halka dalabkiisa uu yahay mid aad u sareeya oo ku haboon qaab dhismeedka mushaarkooda, kaasoo aan noqon doonin mid xad dhaaf ah inkastoo ay dhawaan la wareegeen.
West Ham United ayaa weli lala xiriirinayaa weeraryahanka, kaasoo amaah ugu soo ciyaaray London Stadium qeybtii labaad ee xilli ciyaareedkii 2020-21.
Lingard ayaa dhaliyay sagaal gool 16 kulan oo uu u saftay Hammers 5 gool caawineed, waxaana kooxda David Moyes la rumeysan yahay inay ka fiirsanayaan inay heshiis la gaaraan xagaagan.
Si kastaba ha ahaatee, dhowr kooxood oo ajnabi ah, oo ay ku jiraan Juventus iyo AC Milan , ayaa sidoo kale la sheegay inay si dhow isha ugu hayaan horumarka ku xeeran kubadsameeyaha.